Ndị Ikpe 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Ikpe 1:1-36
1 O wee ruo na mgbe Jọshụa nwụsịrị,+ ụmụ Izrel jụrụ Jehova ase,+ sị: “Ònye n’ime anyị ga-ebu ụzọ gaa buso ndị Kenan agha?” 2 Jehova wee sị: “Ọ bụ Juda ga-aga.+ Lee! M ga-enyefe ala ahụ n’aka ya.” 3 Juda wee gwa Simiọn nwanne ya, sị: “Soro m gbagoo n’ala m+ ka anyị buso ndị Kenan agha, mụ onwe m kwa ga-eso gị gaa n’ala gị.”+ Simiọn wee soro ya gaa.+ 4 Juda wee gaa, Jehova wee nyefee ndị Kenan na ndị Perizaịt n’aka ha,+ ha wee nọrọ na Bizek merie ha, ya bụ, puku mmadụ iri. 5 Mgbe ha hụrụ Adonaị-bizek n’ime Bizek, ha busoro ya agha wee merie ndị Kenan+ na ndị Perizaịt.+ 6 Mgbe Adonaị-bizek gbara ọsọ, ha chụwara ya, jide ya ma gbupụsịa ya mkpịsị aka ukwu na mkpịsị ụkwụ ukwu. 7 Adonaị-bizek wee sị: “E nwere ndị eze iri na asaa e gbupụsịrị mkpịsị aka ukwu na mkpịsị ụkwụ ukwu, bụ́ ndị na-atụtụ nri n’okpuru tebụl mụ. Chineke akwụwo m ụgwọ ihe m mere.”+ E mesịa, ha kpọtara ya Jeruselem,+ o wee nwụọ n’ebe ahụ. 8 Ụmụ Juda busokwara Jeruselem+ agha wee weghara ya, ha wee jiri ihu mma agha bibie ya, gbaakwa obodo ahụ ọkụ. 9 E mesịa, ụmụ Juda gara buso ndị Kenan agha, bụ́ ndị bi n’ógbè bụ́ ugwu ugwu na ndị bi na Negeb+ na ndị bi na Shefila.+ 10 Juda wee gaa buso ndị Kenan bi na Hibrọn+ agha (aha Hibrọn tupu mgbe ahụ bụ Kiriat-aba),+ ha wee gbuo Shishaị na Ahaịman na Talmaị.+ 11 Ha wee si n’ebe ahụ gaa buso ndị bi na Diba agha.+ (Aha Diba tupu mgbe ahụ bụ Kiriat-sifa.)+ 12 Keleb+ wee sị: “Onye ọ bụla bibiri Kiriat-sifa ma weghara ya, m ga-akpọnye ya Aksa+ nwa m nwaanyị ka ọ bụrụ nwunye ya.”+ 13 Ọtniel+ nwa Kinaz,+ nwanne Keleb nke nta,+ wee weghara ya. N’ihi ya, ọ kpọnyere ya Aksa nwa ya nwaanyị ka ọ bụrụ nwunye ya.+ 14 O wee ruo na mgbe Aksa na-ala, ọ nọ na-agwa di ya ka ọ rịọta nna ya ala. O wee kụọ aka mgbe ọ nọ n’elu ịnyịnya ibu.+ Keleb wee sị ya: “Gịnị ka ị chọrọ?” 15 O wee sị ya: “Biko, nye m ngọzi,+ n’ihi na ọ bụ otu ibé ala nke dị n’ebe ndịda ka i nyere m, biko, nye m Gọlọt-meyim.” Keleb wee nye ya Gọlọt+ Mgbago na Gọlọt Ndịda. 16 Ụmụ otu nwoke onye Kenaịt,+ bụ́ nna nwunye Mozis,+ wee si n’obodo nkwụ pụta,+ ha na ụmụ Juda, gaa n’ala ịkpa Juda, nke dị na ndịda Erad.+ Ha na ndị bi n’ebe ahụ wee biri.+ 17 Ma Juda na Simiọn nwanne ya sooro gaa, ha wee gbuo ndị Kenan bi na Zifat, bibiekwa ya.+ E wee gụọ obodo ahụ Họma.+ 18 E mesịa, Juda weghaara Geza+ na ókèala ya nakwa Ashkelọn+ na ókèala ya nakwa Ekrọn+ na ókèala ya. 19 Jehova wee nọnyere Juda, o wee nweta ógbè bụ́ ugwu ugwu, ma o nweghị ike ịnapụ ndị bi na ndagwurugwu ala ha, n’ihi na ha nwere ụgbọ ịnyịnya agha+ ndị nwere mma.+ 20 Mgbe ha nyere Keleb Hibrọn, dị nnọọ ka Mozis kwere ná nkwa,+ ọ chụpụrụ ụmụ Enak atọ n’ebe ahụ.+ 21 Ụmụ Benjamin achụpụghị ndị Jibọs bi na Jeruselem;+ kama ndị Jibọs na ụmụ Benjamin bi na Jeruselem ruo taa.+ 22 N’ime oge a, ụlọ Josef+ gara buso Betel agha,+ Jehova nọnyekwaara ha.+ 23 Ụlọ Josef wee malite iledo+ Betel (aha obodo ahụ tupu mgbe ahụ bụ Lọz),+ 24 ndị nledo ahụ hụkwara otu nwoke si n’obodo ahụ na-apụta. Ha wee sị ya: “Biko, gosi anyị ụzọ anyị ga-esi banye n’obodo a, anyị ga-emere gị amara.”+ 25 Nwoke ahụ wee gosi ha ụzọ ha ga-esi banye n’obodo ahụ; ha wee jiri ihu mma agha+ bibie obodo ahụ, ma ha hapụrụ nwoke ahụ na ezinụlọ ya dum.+ 26 Nwoke ahụ wee gaa n’ala ndị Het+ wuo otu obodo wee gụọ ya Lọz. Ọ bụ aha ya ruo taa. 27 Manase+ ewegharaghị Bet-shian+ na obodo nta ya niile nakwa Teanak+ na obodo nta ya niile nakwa ndị bi na Dọọ+ na obodo nta ya niile nakwa ndị bi na Ibliam+ na obodo nta ya niile nakwa ndị bi na Megido+ na obodo nta ya niile, kama ndị Kenan gbara isi akwara biri n’ala a.+ 28 O wee ruo na Izrel siwanyere ike+ wee mee ka ndị Kenan rụwa ọrụ mmanye,+ ha achụpụchaghị ha.+ 29 Ifrem achụpụghịkwa ndị Kenan bi na Giza, kama ndị Kenan bi na Giza n’etiti ha.+ 30 Zebulọn+ achụpụghị ndị bi na Kitrọn na ndị bi na Nehalọl,+ kama ndị Kenan bi n’etiti ha,+ ha ghọkwara ndị na-arụ ọrụ mmanye.+ 31 Asha+ achụpụghị ndị bi n’Ako na ndị bi na Saịdọn+ na Alab na Akzib+ na Helba na Efik+ na Rihọb.+ 32 Ndị ebo Asha wee biri n’etiti ndị Kenan bi n’ala ahụ, n’ihi na ha achụpụghị ha.+ 33 Naftalaị+ achụpụghị ndị bi na Bet-shimesh na ndị bi na Bet-enat,+ kama ha bi n’etiti ndị Kenan bụ́ ndị bi n’ala ahụ;+ ndị bi na Bet-shimesh na ndị bi na Bet-enat wee bụrụ ndị ha mere ndị na-arụ ọrụ mmanye.+ 34 Ndị Amọraịt nọ na-achụ ụmụ Dan+ wee chụga ha n’ógbè bụ́ ugwu ugwu, n’ihi na ha ekweghị ha gbadata na ndagwurugwu ahụ.+ 35 Ndị Amọraịt wee gbaa isi akwara biri n’Ugwu Hires nakwa n’Aịjalọn+ na Shealbim.+ Ma ezinụlọ Josef siwanyere ike, ha wee manye ha ịrụ ọrụ siri ike.+ 36 Ókèala ndị Amọraịt malitere ná mgbago Akrabim,+ malite na Sila gbagoo.
Ndị Ikpe 1